Umcebo - lena ... Okwakushiwo "ingcebo"
Wonke umuntu enhliziyweni uyaphupha ukuceba, ukungacabangi kusasa futhi ngiyajabula ngokuphila kwethu. Kodwa uyini ingcebo? Ingabe abantu kahle ukuhumusha lo mqondo? Futhi kuphela uma izimpahla ezibonakalayo ayekuqondile lapho esho la izwi? Mhlawumbe ingcebo isigaba akuyona njengoba ewumngcingo njengoba sivunyiwe emphakathini?
Meaning of "ingcebo"
Kukhona izincazelo eziningi eside. Ngakho, ingcebo kungaqondakala njengoba eseduze ukheshe noma nobubanzi ikhono kwengqondo yomuntu nomzimba, indlela aphana ngayo ikhono abe nobubele umusa nezinye izimfanelo eziningi ezingokomoya. Umcebo - lena, ngakolunye uhlangothi, inani elikhulu zonke izinhlobo izinto ezibonakalayo ngesikhathi abantu abanomthelela ukuphila okunethezekile. Kulesi incazelo, incazelo yaleli gama ngokuvamile amalungu lahlotshaniswa imali emphakathini evumela ukuba bachithe imali eningi ukuze isithombe nasekutholeni kwezimpahla okunethezeka.
Ngakolunye uhlangothi, ingcebo - kuyinto izwe elingokomoya, nenhloko-dolobha yalo bokusungula, ehlukahlukene kanye ezihlukahlukene izimfanelo ezinhle. Ngalo mqondo, igama elithi ungaboshwa yiziphi izinto ezibonakalayo, noma kungaba imali noma izimfanelo ntofontofo (amakhaya sokunethezeka, yezikebhe, umklami izingubo, njll). Umcebo iba yini ingabonakali shazi, ngaphandle engena phakathi okushiwo ngokujulile ukwakheka komuntu.
Synonyms kwegama elithi "ingcebo"
Amagama anomqondo ofanayo nelithi "ngcebo" amazwi ikakhulu ukuchaza eside ohlangothini impahla esebenzayo. Ngakho, igama elithi obujwayelekile lahlotshaniswa nokuba "okunethezeka". Okunethezeka - kuba khona umuntu lwezinto izingubo ezibizayo, izinto ukukhulisa isithunzi emphakathini ukwandisa ezingeni isikhundla emphakathini. Leligama lisho izinto ezibonakalayo kuphela, okuyinto zenzelwe ukwenza ukuphila komuntu ngokunethezeka.
Enye elifanayo - ngokuchichimayo. Ngokuchichima kuyinto enkulu, lemali mikhulu okuthile. Lo mqondo kungaba ngokuqinisekile uchaza impahla kanye kuwufanele okungokomoya, kodwa kaningi ke isasetshenziswa ukuchaza imali yemali.
Igama elithi "ukuchuma" kwezinye izimo kungase lahlotshaniswa nokuba nengcebo. Lokhu kwenzeka endabeni uma kuziwa into engakhulumi (idolobha, emaphandleni, ensimini, isifunda, njll). Inkulumo ethi "elichumayo", isibonelo, ungakwazi ukuchaza umuzi ngezingazi ezingeni lelisetulu ukuphila, izimo ezikahle zokuthuthukiswa yayo.
Bomcondvophika ukuba igama elithi "ingcebo"
Okwakushiwo lucebe kwegama elithi "ingcebo" lingahunyushwa nangokuthi wachaza ngokusebenzisa bomcondvophika. Ngakho, ezivame kakhulu babo - the "ubumpofu". Leli gama kungaqondakala njengoba kunokushoda kwezimali ukudala izimo ukhululekile ephilayo futhi khathizwe ewumngcingo, ukuntuleka izimfanelo ngokwengqondo.
Enye antonym - "ubumpofu". Leli gama lichaza impahla okubi kakhulu futhi isimo esingokomoya umuntu, kunokuba ubumpofu. Nalapha futhi, leli gama lichaza izici ngaphakathi nangaphandle umphakathi namalungu awo ngabanye.
Enye kuphambene ingcebo isidingo. Leli gama liyazikhulumela. Kuhlanganisa e nencazelo yalo kwalowo muntu lapho akwanele ukhululekile impilo egcwele, ukuthi imali yakhe incane kakhulu ukuthenga izinto ezibizayo, izimfashini ehlonishwayo, amagajethi kanye nokunye. D.
Ngo mpilo esintu athuthukile ukumelwa sasivumela esitebeleni yengcebo. Kuye ngamunye amasiko ikakhulukazi namasiko abantu lapho babekhuluma kakhulu ezinye izinhlamvu futhi nama mascots, ezisiza ukuheha umcebo nokuchuma endlini.
Ikakhulukazi kabanzi ingcebo indaba ephathwayo kwembulwe amasiko Eastern. Ngokwesibonelo, e China for shui feng uchaza nje lokho izintelezi ukugcina ekhaya ukuheha umcebo nempumelelo, kodwa futhi nendlela okufanele abekwe ukuthi amandla amanzi, umoya, umlilo nomhlaba ungalukhanseli nomunye. Ngakho, uphawu ingcebo China - umlingisi eponymous. Kukholakala ukuthi lesi sithombe kumele ibekwe eceleni imali inombolo banda anda, isibonelo, ekudwebeni isikhwama, wafaka ucezu ephephile iphepha iphethini, futhi eduze eziyigugu (ebhokisini ubucwebe noma amaphepha abalulekile). Enye mascot China - zemali ngezimbobo sikwele. Kumele elenga intambo endlini noma egqokwa entanyeni. Iselesele ngohlamvu lwemali emlonyeni izosiza ukuheha umcebo. Ngokusho Feng Shui kubalulekile ukubeka izibalo eziningana egumbini ngalinye eningizimu-mpumalanga emuva emnyango. Lokhu kuzodala ukuzikhohlisa ukuthi iselesele basuke nje endlini futhi baletha nge imali yakhe.
Ngokwesiko Russian njengoba iwuphawu ingcebo. Lokhu ukhamba, okuyinto ngokwesiko hung phezu emnyango ongaphambili. Kukholakala ukuthi lokhu talisman kuletha ekhaya ingcebo, injabulo kanye inhlanhla, futhi uxosha imimoya emibi, okonakalisa izinto nezimo zengqondo ezingalungile.
abantu Eastern babekhulekela inqwaba onkulunkulu inganika abantu nokuchuma, kwengcebo nenjabulo. Ezinganekwaneni Indian, unkulunkulu wengcebo - kuyinto Kubera. Lokhu unkulunkulu akugcini nje esandisa ingcebo, kodwa liveza izimfihlo ngcebo engaphansi komhlaba futhi izinsimbi eziyigugu.
Lokho, lokho unkulunkulu yokukhulekela, hhayi kuphela incike izintandokazi umuntu ngamunye, kodwa futhi ku ngaphansi kwaziphi uphawu zezinkanyezi, wazalwa futhi lapho unyaka ezinkanyezini empumalanga. Ngakho, lonkulunkulu Buddhist Dzambala Kunconywa ukuba bathandazele abantu ababezalelwe uNyaka Rooster noma Monkey.
Ngo zamaGreki, unkulunkulu wengcebo - Plutus. Wakhuliswa njengomFarisi kusukela zisencane onkulunkulukazi ezimbili: Tyche futhi Eyrenoy. Plutus kuletha ukuchuma inzuzo kuphela labo abasebenza kanzima. Yena ngokwakhe akazange azi kanjani ukuze zilahlwe ngendlela efanele ezibonakalayo, ngoba yena wajeziswa by Zeus, unkulunkulu ophakeme amaGreki.
Izitatimende mayelana nengcebo
Abantu abaningi kakhulu baye okukhulunywa ezingcaphunweni zabo ingcebo. Lokhu lesisho, kugcwale injongo ejulile. "Izinto zenani elikhulu enkulu - siphile yaneliswani kancane," - wathi ukuchuma imbongi engumGreki nomlobi uPlato. Lesi sitatimende kungenziwa ukuchaza kanje: zokufuna kakhulu, uba abahahayo ayeke ukuba siqonde ukuthi sebenalo.
"Zonke ngomnotho - ingumkhiqizo zomsebenzi" - kuchaziwe okunethezeka nokuchichima Dzhon Lokk, isazi sefilosofi ngesiNgisi. Kusukela quote yakhe kusobala ukuthi isimo ezinkulu zezimali akuyona kufezekiswe ngaphandle umzamo. Lutho uthola empilweni yami ngesizathu esithile.
Umcebo njengoba isigaba impahla
Okwakushiwo lokuqala ingcebo izwi - ukutholakala kwezinto ezibonakalayo, okungukuthi imali. Inani elikhulu amayunithi yemali evumela umuntu ukuba ucabange ngalokho ukuthenga, sizodlani, lapho baphumule. Ngakolunye uhlangothi, ingcebo akusho ngempela isidingo sokuthi kube zobugovu. Ngokwesibonelo, abantu abaningi abadumile banikele imali eningi ngoba esiza abantulayo, ekusizeni izinhlangano zamazwe ngamazwe wathumela zosizo ezingxabanweni esishintshashintshayo. Zonke lezi ziyizibonelo zokuthi wenzani ingcebo ongakhonza wonke umphakathi, hhayi umuntu.
Umcebo njengoba isigaba okungokomoya
ingxenye Material - ingxenye encane nje kuphela ngalokho likhona welithi "ingcebo". Libuye ikhono kanye nesifiso sokwenza izenzo ezinhle, ngolwazi olunzulu emikhakheni ehlukene yempilo, izimiso eziphakeme zokuziphatha, futhi ukuziphatha okuqinile. Yilokhu okufanele alwele ngempela wonke umuntu, akugcini imibono eyiphupho emincane ingcebo inqwaba imali ukuthi ungakwazi achithwa ngokungacabangi kwesokudla noma kwesokunxele ukuze zonke izinhlobo fun.
Funda French ngokushesha
Kuphi ziqala ukufunda isiNgisi - Amathiphu newbies
Modal tento ngesiNgisi: kuyini nokuthi yini "ukudla"?
Kungakhathaliseki Huskies ezimhlophe? White Husky (isithombe)
Simo abathandwayo Lokuvikelwa Day enkulisa
Electric ensimini umfutho
Deadlift. ukusebenza inqubo
Ezikhula iminyaka eminingi Bulbous. Izimbali, Ezikhula iminyaka eminingi for engadini
Imizwa oba nayo ngemva bengafani imizwa? Sense futhi ukuzwa. Ukubonisa nemizwa nemizwelo